Ethiopia oo ku Dhawaaqday Qorshe ay Dib u Dajin Ugu Samaynayso 132,000 oo Qoys Mudo ka Yar Sanad – Rasaasa News
Nov 18, 2011 000 oo Qoys Mudo ka Yar Sanad, ethiopia, Ethiopia oo ku Dhawaaqday Qorshe ay Dib u Dajin Ugu Samaynayso 132, Somali
Nairobi, November 18, 2011 [ras] – Arimaha dib u dajinta qoysaska la rabo in lagu meeleeyo meelo ay ka faa,iidaysan karaan ayay dawladu sheegtay in ay tahay rabitaan [voluntary], waxaana laga samayn doonaa afar  degaan, oo uu ugu horeeyo degaankaSomalidu.
Wasaarada wadaaga Ethiopia u qaabilsan degaanada, ayaa sheegtay in arimahani ay ka caawin doonaan qoysaska in ay ka faa,iidaystaan hawlaha horumarinta dhaqaalaha bulshada ee dalka.
Wasiirka arimaha wadaaga Ethiopia Dr. Shiferaw Tekelemariam ayaa yidhi “marka dib loo dajiyo dadkan xaafad waxay ka faa,iidaysan doonaan horumarinta dhaqaalaha bulshada ee dalkooda.”
Waxaa la sheegay in dib u dajin loo samaynayo 55,000 oo qoys degaanka Somalida Ethiopia [ogaden region], 27,000 oo qoysna ay ka iman doonaan Degaanka Canfarta, 30,000 waxay ka iman Degaanka Benishangul[gumus] iyo 20,000 oo ka imanaya degaanka Gambeelada.
Dawladu waxay sheegtay in degaanada ay bar tilmaameedsatay ay ka mid yihiin degaanada ay abaartu sida xun u saamaysay, kuwaas oo u baahan caawimaad gaar ah.
Wasaaradu waxay sheegtay in la wargaliyey baarlamaanka Arbacadii, dadka wada hawlaha dib u dajintu waxay arki doonaan dadka la degaan rogayo si rabitaan ah meelo kaga haboonaan kara hanaankooda nololeed ee ay ku nool yihiin.
Sanadkii tegay 125,085 oo ka mid ahaa 144,214 qoys ayaa dib loo dajiyey degaanka Somalida iyo degaanka Benishangul Gumus sida la sheegay.
Wasiirka arimaha wadaaga Dr. Shiferaw ayaa yidhi “hawlaha dib u dajinta ee sanadkan ayaa lagu wadi doonaa wajiyo kala damdambeeya.
Dib u dajinta ayaa la filayo in ay qaadato ugu yaraan mudo sideed bilood ah, dawladana ugu kici doonta aduun dhan tobonaan milyan oo Doolar.
Dadweynaha Somalida ah ayaa cuqdad weyn waxay ka qabaan arimaha dib u dajinta, kuwaas oo waayo aragnimo u leh arimaha dib u dajinta. Xukuumad kasta oo qabta hogaanka Ethiopia, ayaa samaysa arimaha dib u dajinta walina wax wanaag ah oo ka soo kordha lama arag.
Kobcinta dhaqaalaha iyo isbadalka noloshu waxay u baahan yihiin in hore loo maariyo hanaanka nololeed ee ay ku nooshahay bulshadu [redevelopment life style], taas oo ka kharaj yar guushana u dhaw. Wax alaale wixii hore leh ee ayna bulshadu hore u aqoon waxaa uu ku dambeeyaa khasaare.
Inta la ogg yahay labo dib u dajin, ayaa ka dhacday degaanka Somalida Ethiopia [ogaden region], mana jirto wax guul ah oo laga gaadhay. Dadkii dib u dajinta loo sameeyey waxay dib ugu soo laabteen degaanadoodii iyo noloshoodii hore.
Su,aasha isweydiinta leh, ayaa ah dadka ma degaankooda ayaa dib u dajin loogu samayn mise degaan kale, dhulka laga kicinayo maxay dawladu u isticmaali doontaa? waa arimaha ay dad badani isweydiinayaan oo u baahan in dadweynaha dibad iyo gudaba loo faahfaahiyo.
Dadweyne iyo Aqoonley u dhashay degaanka Somalida Ethiopia, oo aan ka yarayn kuwa ku nool degaanka ayaa ku nool dalalka reer galbeedka, waxayna jecel yihiin in ay la socdaan arimaha ka socda degaanka Somalida Ethiopia.
TO: H.E. Mr. Meles Zenawi, The prime minister of Ethiopia